Polisim-pirenena – Polisy 1098 nanome rà
Polisy vaovao miisa 1098 no hanome rà maimaimpoana teny amin’ny HJRA Ampefiloha.
Polisy nanome rà
Polisy maro avy tamin’ny andiany “Fenitra” no nanome rà maimaimpoana teny amin’ny HJRA, ny talata lasa teo. cc : Toria Dimbiniaina
Nanome rà maimaimpoana ho an’ny vahoaka Malagasy ireo Polisy vaovao tao amin’ny andiany “Fenitra” teny amin’ny HJRA Ampefiloha ny talata lasa teo.
Miisa 400 ireo Polisy vaovao tonga nanome rà tamin’izany. Mbola ho avy hanome rà ihany koa ny ambiny amin’ireo andiany « Fenitra ».
Miisa 1098 no fitambaran’ireo hanome rà. Nilaza ny minisitry ny Filaminam-bahoaka ny Contrôleur General de Police Rafanomezantsoa Roger fa “fanampiana sy ho vonjy aina ho an’ireo mpiray tanindrazana no nanaovana izao adidy izao satria izay manome ra dia mamonjy aina”.
Nanamafy ihany koa ny Mpandrindra ny andiany « Fenitra », Inspecteur de police Andriamialimananirin­a Rodrigue fa » ho an’ny vahoaka no antom-pisian’ny Polisim-pirenena ka rariny raha hanome rà maimaim-poana ».
Nisaotra ny Polisim-pirenena ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny HJRA tamin’izao hetsika izao nohon’ny fahafoizany ny rany ho famonjena ny mpiara-belona.
Hijanona eto Antananarivo ireo Polisim-pirenena vaovao ireo, hanamafy ny fitandroana ny filaminana mandritra ny fitsidihan’ny Papa Fransoa. Aorian’izay kosa dia hiparitaka any amin’ny Faritra izy ireo. Hisy amin’izy ireo araka izany ao amin’ny FIP ary hisy ihany koa ao amin’ny « central ».